Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Danny Drinkwater Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ
LB na-egosi Full Life Akụkọ nke a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Rinkụọ'. Anyị Danny Drinkwater Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke mmeri Leicester Premier League na onye bụbu kpakpando Chelsea na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere egwuregwu ya na-eme ikike mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ele akụkọ Danny Drinkwater akụkọ nke gụnyere ịmụtakwu banyere nne na nna ya, nwanne ya nwoke, nwanne ya, na ndụ ya wdg. Ndụ ya n'èzí pitch bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Danny Drinkwater Childhood Story - Ndụ Mmalite na Ezinụlọ:
A mụrụ Daniel Noel Drinkwater na ofbọchị 5th nke Machị 1990. A mụrụ ya na Manchester, United Kingdom site na nne na nna ya Mr na Mrs Drinkwater.
Danny nọrọ oge ọ bụ nwata na Greater Manchester. Ọ bụ onye na-akwado United dị ka nwatakịrị. Ọ malitere ịkụ bọl mgbe ọ dị obere nke 4. Ọganihu ya pụtara ìhè na nke dugara na Manchester United agụmakwụkwọ inweta ya. Mgbe ahụ ọ ka bụ nwa akwụkwọ.
Gị, Ọ dịtụbeghị mgbe mbụ otu egwuregwu gosipụtara United n'okpuru Alex Ferguson.
Ọ bụ onye a na-ejighị eji ya mee ihe maka Njikọ Njikọ ikpeazụ nke egwuregwu na Hull tupu 2009 Champions League merie Barcelona.
O weghaara mgbagha na Huddersfield, Watford, Cardiff na Barnsley tupu ya abanye maka Leicester na January 2012. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Danny Drinkwater Biography - Banyere aha ya:
Aha Drinkwater sitere n'okwu 'ihe ọ drinkụ drinkụ' na 'mmiri'. Ọ bụ aha aha e nyere ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ biya na 1066 AD Aha mbụ aha nna ya bụ Cheshire
ebe ha nwere oche ezinaụlọ. Nke a bụ tupu Vikings buso England agha.
Dabere na AncestryUK “Na emepechabeghị, ale bụ adịghị ike bụ ihe ọ universalụ universalụ ụwa niile n'etiti klaasị dara ogbenye, ma dịkwa ọnụ ala karịa ị beụbiga mmanya ókè, ebe enwere ike ị ,ụ mmiri n'onwe ya.
Aha nna ya bụ aha njakịrị na-egwu egwu e nyere onye ogbenye ma ọ bụ onye miser kwuru na ọ gaghị enwe ike ma ọ bụ na ọ chọghị ịkwụ biya, ma ọ bụ nwere ike bụrụ na e nyere ya onye na-elekọta ụlọ ma ọ bụ onye ama ama ama. ”
Danny Drinkwater Untold Biography Eziokwu - A Hụrụ Ya n'Anya na Social Media:
N'amaghi anya, mgbasa ozi mmekọrịta na-arahụ ebe ọ bụ na aha nna ya ghọrọ onye a ma ama n'oge ọ nọ na Leicester. N'oge mmanya na-agbaji n'ụlọ egwuregwu Leicester na Tottenham, A na-ese ihe ọṅụṅụ Drinkwater mmiri ọṅụṅụ. Nke a hụrụ iwe na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Danny Drinkwater, Leicester emeriwo 'Ngwọta nke Akpịrị rstkpọ Nkụ' Onyinye n'oge ya na Leicester.
Drinkwater aghọwo ọkacha mmasị ndị Fans na Chelsea. Abụ nke na-ada ụda gburugburu Stamford Bridge na-aga dị ka nke a:
"Ya mere, nke a bụ gị Danny Drinkwater, Chelsea hụrụ gị n'anya karịa ka ị ga-ama, oh woah oh oh".
Nke ahụ bụ ABINK ỌINKụ mmanya.
Ibi Ndụ Nrọ nke Chelsea:
Drinkwater kwuru na ọ na-enwe obi ụtọ na Stamford Bridge mgbe ọ gbasịrị ọgwụ na 31st August 2017 nyefe ụbọchị ụbọchị.
O kwukwara, sị: 'Obi dị m ụtọ ịbụ onye ọkpụkpọ Chelsea ma enweghị m ike ichere ịmalite. Ọ bụ njem dị ogologo iji ruo ebe a mana enwere m obi anụrị ma ana m atụ anya inyere ọgbakọ ahụ aka inweta ọtụtụ trophi. '
Chelsea bịanyere aka na ya n'ihi na ọ na-abụkarị onye na-eme egwuregwu na-asụ Bekee na-eji usoro ịghafe agafe. Ọ dịkwa mkpa iji mee ka nhọrọ nhọrọ etiti ha sikwuo ike. Ngwakọta dị mma na Bakayoko.
Ihe ha kwuru banyere ya:
“Ọ bụ ezigbo onye ọkpụkpọ. Igbe na igbe ma na-agbachitere nke ọma. Ihe ọ bụla ọ na-eme dị mma nke ukwuu. Ọ bụrụ na Chelsea chọrọ ya, ọ dị njikere, ” - Claudio Ranieri, Ọgọst 2017.
“Ihe o mere emeela ka mmadụ niile mara ya. Ọ nwere oge dị egwu na otu egwuregwu na-enwe oge dị egwu, mana ọbụlagodi afọ gara aga anyị maara ya.
Na mpaghara ahụ, asọmpi a dị oke egwu, mana nke a bụ ohere iji kpọbata ya ma hụ ma ọ ga-enwe ike ịmegharị ụdị bọọlụ ọ rụgoro na Leicester. ” - Roy Hodgson, 17 March 2016.
Bakayoko ejideghị ụjọ:
Onye na-agbara Chelsea bọọlụ Tiemoue Bakayoko esi ọnwụ na ọ naghị echegbu onwe ya gbasara asọmpi o kwere omume nke Danny Drinkwater jụrụ.
N'okwu ya site na SportsMole.
"Danny Drinkwater adịghị atụ m ụjọ," onye France gwara SFR Sport. “Ọ bụ asọmpi ahụ. Ọ dị mma, echere m na otu ọ bụla chọrọ nke ahụ. Ọ na-eme ka i nwee ọganihu. ”
A kwenyere na Chelsea na-achọsi ike iwusi ike n'etiti ha site na inweta Bakayoko na Drinkwater na-esote ọpụpụ Nemanja Matic ka Manchester United.
Harry Kingsley kwuru
Daalụ maka ịhụ nke a nyeere aka nke ukwuu,
Echere m na ikwesiri inwe obi iru oru na ya